Bollywood - Setopati | Setopati Kala - Nepal's Digital Newspaper
नयाँ दिल्ली, जेठ १५ (एजेन्सी) - दुई महिनाअघि मेलबर्नबाट मुम्बई फर्किदैं गर्दा कपिल शर्माले आफ्ना सहकर्मी सुनिल ग्रोवरमाथि गरेको खराब ब्यवहारका कारण उनको शो नै संकटमा परेको थियो। ‘दि कपिल शर्मा शो’ को ठाउँमा सलमान खानको ‘दशका दम’ प्रसारण हुने समाचारले कमेडियन कपिल शर्मा शोको निरन्तरतालाई लिएर आशंका उब्जिएको थियो।
एजेन्सी, मुम्बई, जेठ १० - भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका कट्टर समर्थक अभिजीतले सोमबार भारतीय जनता पार्टीका एक नेताको यौन काण्डको समाचारबारे महिलालाई आरोप लगाउँदै ट्वीट गरेका थिए। उनले जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयकी विद्यार्थी शिला रसिदको चरित्रहत्या गर्ने ट्वीट गरेका थिए।
मुम्बई, जेठ १० (एजेन्सी) - बाहुबली २ ले बलिउडको सबै कीर्तिमान भंग गर्‍यो। फिल्मका हिरो र हिरोइन मात्र होइन, अहिले भिलेन पनि चर्चामा छन्। यस्तै, बाहुबलीको एक पात्र कालकेयको पनि चर्चा अहिले चुलिएको छ। फिल्ममा कालकेयको अभिनय धेरै ठूलो छैन। संवाद पनि सानो छ। तरपनि कालकेयको भयानक रुप र नबुझिने भाषा दर्शकहरुलाई खुब मजा आइरहेको छ।
एजेन्सी , मुम्बई, जेठ १० - यसमा उनको दोहोरो भूमिका देख्न सकिन्छ। एउटा भूमिकामा उनी सेक्युरिटी गार्ड देखिएका छन् भने अर्कोमा उनी एक बालकलाई मार्सल आर्ट सिकाइरहेका छन्। फिल्मकी मुख्य अभिनेत्री आयशा टाकिया हुन्। जो सलमान खानसँगको ‘वान्टेड’बाट चर्चित छन्।
एजेन्सी मुम्बई, जेठ १० - पक्राउ पुर्जी जारी भएका अभिनेताहरुमा दक्षिण भारतका अर्का चर्चित अभिनेता सूर्या पनि छन्। चर्चित दक्षिण भारतीय फिल्म गजनी, सिंघम, सिंघम २ जस्ता थुप्रै चर्चित फिल्मका अभिनेता सूर्यासहित चेरान, विजयकुमार, सरतकुमार, विवेक, श्रीप्रियालगायत छन्। उनीहरुले एक पत्रकारका विवादास्पद बयान दिएका थिए। त्यसपछि उनीहरुविरुद्ध सन् २००९ को अक्टुबरमा मानहानीको मुद्दा दायर भएको थियो। तर, उनीहरु अदालतमा उपस्थित भएका थिएनन्। सोही मुद्दा हाल सतहमा आएको हो।
मुम्बई, जेठ ९ (एजेन्सी) - मनिषा कोइरालाले बलिउड सुपरस्टार शाहरुख खानसँगै धेरै फिल्म खेलेकी छैनन्। तर, शाहरुखसँग उनको ट्युनिङ गज्जबको मानिन्छ। मनिषाले मणिरत्नमको ‘दिल से’ मा बलिउडका किङ खानसँग अभिनय गरेकी थिइन्।
एजेन्सी, मुम्बई, जेठ ८ - आफूले सपना देखेको क्षेत्रमा करियर बनाउन एकै मौकामा सायदै कसैले पाउँछन्। वक्र रेखामा हिँड्ने जिन्दगी भौंतारिँदै कता पुग्छ कसैलाई पत्तो हुँदैन। आफूले वर्षौंदेखि सपना साँचेको क्षेत्रमा काम गर्न नपाउँदा नपाउँदा सोच्दै नसोचेको क्षेत्रमा पुग्ने पनि धेरै हुन्छन्। कतिले सपना साँच्दासाँच्दै पनि बाध्यताले अर्कै काम गर्न परिरहको हुन्छ। यहाँ केही बलिउड सेलिब्रेटीलाई प्रस्तुत गरिएको छ- जसले फिल्मक्षेत्र भित्रिनुअघि अभिनयसँग प्रत्यक्ष साइनो राख्ने पेशा गर्थे।
छोरीको फिल्म हिट गराउने शक्ति कपुरको तरिका
मुम्बई, जेठ ६ (एजेन्सी) - फिल्म अभिनेत्री श्रद्धा कपुरको ‘हाफ गर्लफ्रेन्ड’ गत शुक्रबार रिलिज भएको छ। फिल्मको सफलताका लागि श्रद्धाका बुवा शक्ति कपुर पहिलो शो नै हेर्न दिल्लीको थिएटर पुगेका थिए।
पूर्वपत्नीका नाममा ऋतिकले किने महंगो अपार्टमेन्ट
मुम्बई, जेठ ६ (एजेन्सी) - हालै उनले आफ्नो पुरानो सम्बन्धलाई पुनस्थापित गर्न सुजेनको नाममा जुहुस्थित महंगो अपार्टमेन्ट खरिद गरेको खुलासा भएको छ। ऋतिकले अपार्टमेन्ट आफ्नो घर नजिकै खरिद गरेका छन्।
एजेन्सी, मुम्बई, जेठ ५ - तीन हप्ता अगाडि रिलिज भएको फिल्मले अहिलेसम्म १५ सय करोड भारु कमाइसकेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। बाहुबली २ हिन्दी, मलायलम लगायतका भाषामा रिलिज भएको छ।
एजेन्सी, जेठ ४ - कल हो ना हो, हम आपके हे कौन, मेने प्यार किया, साजन, वास्तव, कुछ कुछ होता हे, हम साथ साथ हैजस्ता फिल्म तथा तु तु मे मे, श्रीमान–श्रीमतीजस्ता टेलिश्रृंखलाबाट चर्चित अभिनेत्री रीमा विगत चालीस वर्षदेखि बलिउड तथा दक्षिण भारतीय फिल्ममा सक्रिय थिइन्।
रजनीकान्तलाई आयो डनका छोराको धम्की
एजेन्सी, वैशाख ३१ - चर्चित अभिनेता रजनीकान्तलाई धम्की आएको छ। उनलाई यो धम्की कुनै बेला मुम्बइका डन रहेका हाजी मस्तानका छोरा भनिने सुन्दर शेखरले दिएका हुन्। धम्की एक पत्र मार्फत् दिइएको हो। धम्कीमा भनिएको छ, ‘हाजी मस्तानमा आधारित फिल्म बनाइरहेको भए ठीकै छ, तर फिल्ममा यदि रजनीकान्तले हाजी मस्तानलाई नकारात्मक भूमिकामा देखाए भने, रजनीकान्तलाई छोडिदैैंन।’
'बाहुबली २' भन्दा पछाडि पर्‍यो आमिरको 'दंगल'
एजेन्सी, वैशाख ३० - यही अप्रिल २८ मा रिलीज भएको ‘बाहुबली २ः द कन्क्लुजन’ ले आमिर खानको ‘दंगल’ लाई पछाडि पारेको छ। ‘बाहुबली २ः द कन्क्लुजन’ को हिन्दी संस्करणले मात्र १४ दिनमा भारतको घरेलु बक्स अफिसमा ‘दंगल’ पूरै कलेक्सनलाई पछाडि पारेको हो।
अमिताभको मूर्ति सजाइयो कोलकाताको मन्दिरमा
एजेन्सी, वैशाख ३० - बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनका फ्यानहरु उनलाई भगवान् नै मान्छन्। उनका धेरै ठाउँमा मन्दिर नै बनाइसकेका छन्। हालै उनको नयाँ फिल्म ‘सरकार ३’ आएको छ। योसँगै उनका फ्यानहरुको संघ ‘अल बंगाल अमिताभ बच्चन फ्यान्स एसोसिएसन’ ले एक मन्दिरमा अमिताभको मूर्ति स्थापना गरेका छन् सुब्रत बोसले बनाएको यो प्रतिमा २५ किलोको छ।
प्रभासले स्वीकारेनन् १८ करोडको विज्ञापन !
एजेन्सी, वैशाख २९ - उनलाई धेरै फिल्म र विज्ञापनका लागि प्रस्तावको ओइरो नै लागको छ। तर, उनले यसमा खासै चासो देखाएका छैनन्। उनलाई हालै एक विज्ञापनका लागि १८ करोड भारुको प्रस्ताव आएको थियो। तर, उनले यसलाई स्वीकार गरेनन्।
अक्षयको नयाँ फिल्मको नामै सुनेर हाँसे प्रधानमन्त्री मोदी !
एजेन्सी, वैशाख २९ - अक्षय कुमारको आगामी फिल्मको नाम सुनेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हाँसेका छन्। यो कुरा अरु कसैले होइन अक्षय स्वयंले बताएका हुन्।
एजेन्सी, वैशाख - सुन्दर मानिने बलिउड कलाकार अर्बाज खान र मलाइका अरोराको जोडी अन्ततः औपचारिकरुपमै छुट्टिएको छ। धेरै वर्षको विवाह बन्धनपछि उनीहरु छुट्टिएका हुन्। उनीहरुको १४ वर्षीय छोरा अरहान छन्।
कट्रिनासँगको सम्बन्ध टुटेपछि रणवीरले मागी विवाह गर्ने!
एजेन्सी , मुम्बई, वैशाख २७ - उसो त रणवीरको जीवनमा आएकी कट्रिना पहिलो युवती थिइनन्। त्यसअघि उनको नाम अन्य चार युवतीसँग जोडिएको थियो। अवान्तिका मलिक, सोनम कपुर, नन्दिता मेहतानी र दीपिका पादुकोणसँगको प्रेम सम्बन्ध टुटेपछि रणवीर र कट्रिनाको सम्बन्ध जोडिएको थियो। रणवीरसँग प्रेममा पर्नुअघि कट्रिना र सलमान खानको अफेयर चलेको चर्चा थियो।
सुहाउँदो भूमिका नभएकाले 'बाहुबली २' को हिस्सा बनेनन् अमिताभ
एजेन्सी, वैशाख - बक्स अफिसमा धमाल मचाउन सफल दक्षिण भारतीय फिल्म बाहुबली २ मा बलिउड कलाकारहरुलाई पनि लिन खोजिएको थियो। कसैले यो फिल्ममा पैसा कम भएर त कसैको लागि उपयुक्त भूमिका नै नभएर उनीहरु यसमा संलग्न हुन पाएनन्। श्रीदेवीलाई राजमाताको भूमिकाका लागि प्रस्ताव गरिएको भए पनि उनले पारिश्रमिक कम भएका कारण खेलिनन्।
श्रीदेवीले किन बाहुबलीमा राजमाताको अभिनय गरिनन्?
नयाँ दिल्ली, बैशाख २६ (एजेन्सी) - नौ दिनमा १ हजार करोड भारु कमाएर इतिहास रचेको 'बाहुबली २' को अहिले सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ। बाहुबली र बाहुबली २ मा एउटा महिला पात्र राजमाता शिवगामीको पनि खुब चर्चा भइरहेको छ। यो भूमिकामा दक्षिण भारतकी अभिनेत्री राम्या कृष्णन देखा परेकी थिइन्।
'बाहुबली २' ले ९ दिनमा कमायो १ हजार करोड
मुम्बई, बैशाख २५ (एजेन्सी) - बाहुबली २ ले पैसा कमाउने मामिलामा हिन्दी फिल्मको सबै कीर्तिमान भंग गरेको छ। एसएस राजामौली निर्देशित फिल्मले रिलिज भएको ९ दिन भित्रै १ हजार करोड भारतीय रुपैयाँको कारोबार गरेको छ।
ऐश्वर्याका कारण सलमानसँग मेरो प्रेम छिनियोः सोमी
मुम्बई, बैशाख २३ (एजेन्सी) - ५० वर्षको उमेरमा पनि हिन्दी सिनेमाको ‘मस्ट इलिजेबल ब्याचलर’ को उपाधि पाएका सलमान खानको विषयमा उनको पूर्व प्रेमिका सोमी अलीले एउटा सनसनी खुलासा गरेकी छिन्।
जस्टिन बिबरको सुरक्षाको जिम्मा सलमान खानका बडीगार्डलाई
एजेन्सी, वैशाख २३ - चर्चित गायक जस्टिन बिबर भारत आउने भएका छन्। उनको आगमनका लागि भारतमा विशेष तयारी भइरहेको भारतीय समाचारमाध्यमले जनाएका छन्। विश्वव्यापीरुपमा चर्चित बिबरको सुरक्षाका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। बिबरको सुरक्षाको जिम्मा बलिउड हस्ती सलमान खानका बडीगार्ड शेराले पाएका छन्।
बलिउडमा मनिषाको कमब्याक, ‘डियर माया’को ट्रेलर रिलिज (भिडियो)
एजेन्सी , मुम्बई, वैशाख २३ - पाँच वर्षअघि ‘भूत रिटन्र्स’ मा अभिनय गरेपछि उनले त्यसपछि कन्नड, तामिल र तेलेगु भाषाका तीन फिल्ममा अभिनय गरेकी थिइन्। हाल उनी थ्री इडियट्स, पीकेजस्ता फिल्मका निर्देशक राजकुमार हिरानीले सञ्जय दत्तको जीवनीमाथि बनाइरहेको फिल्ममा सञ्जयको आमाको भूमिका गर्दैछिन्।
भारतीय अभिनेत्री रेखा सिन्धुको कार दुर्घटनामा निधन
एजेन्सी, वैशाख २२ - भारतको कर्नाटककी कलाकार रेखा सिन्धुका मृत्यु भएको छ। चेन्नइमा बस्दै आएकी रेखा बेंगलरु जाँदै गर्दा सो दुर्घटना भएको बताइएको छ।घटनास्थलमै उनको मृत्यु भएको थियो। रेखासँग अभिषेक कुमारन, जयांकंद्रन र रक्षन नामका व्यक्ति पनि रहेको बताइएको छ। उनीहरुको पनि मृत्यु भएको छ।
सलमान खानको ‘ट्युबलाइट’ टिजर सार्वजनिक (भिडियो)
एजेन्सी, मुम्बई, वैशाख २२ - सलमान खान अभिनित फिल्म ‘ट्युबलाइट’ को टिजर रिलिज भएको छ। यसअघि सलमान खानलाई लिएर ‘एक था टाइगर’, ‘बजरंगी भाइजान’ बनाएका निर्देशक कविर खान निर्देशित फिल्मले भारत–चीन युद्धको बेलाको कथा भन्छ।
'बाहुबली २' को ६ दिनको कमाइले कीर्तिमान रच्यो, आमिरको ‘पीके’ र ‘दंगल’ पछाडि परे
नयाँ दिल्ली, बैशाख २१ (एजेन्सी) - रिलिज पूर्व १ सय करोडको कमाइ गरेको 'बाहुबली २' ले ६ दिनभित्र हिन्दी सिनेमाको कमाइको सबै कीर्तिमान भंग गरेको छ। 'बाहुबली २' ले आमिर खानको ‘पीके’ र ‘दंगल’ दुवैको कमाइलाई पछाडि छोडेको छ।